Ny morontsiraka 10 tsara indrindra any Brezila | Vaovao momba ny dia
Toerana hafahafa i Brezila izay maro amintsika no maniry ny handeha amin'ny fotoana rehetra, fa any ankoatran'i Rio de Janeiro dia misy toerana tsy mampino hita. Ho an'ireo tia amoron-dranomasina dia manolotra mihoatra ny roa arivo ity firenena ity, ka sarotra ho antsika ny misafidy vitsivitsy fotsiny ho tsara indrindra.
Raha nanao laharana amoron-dranomasina mahafinaritra izahay mba hitsidika an'i Brezila dia tsy ho vita intsony izany, koa manasa anao izahay hahita ireo zoro tsy dia malaza loatra izay manana ny hakantony koa. Eto isika dia hiresaka momba ny sasany izay malaza amin'ny mpizahatany, na dia tianay aza ny hahita any amin'ny toerana misy ny maha-mahafinaritra azy tsirairay avy. morontsirak'i Brezila.
7 Lope mendes
9 Kanety tapaka
Ity morontsiraka ity dia ao amin'ny nosy Fernando de Noronha, ary nofidian'ny TripAdvisor ho morontsiraka tsara indrindra eran-tany amin'ity taona 2016 ity, ka tsy azo adino. Voafidy izy io satria tena paradisa hita, ary hahatongavana any dia mila mandeha lavitra ianao ary midina tohatra vitsivitsy manaraka ilay hantsana. Izany no antony tsy toerana feno mpizahatany ary mitazona hatsarana tsy manam-paharoa. Ho fanampin'izany, manana rano mangarahara sy fitahirizana tontolo voajanahary tsy manam-paharoa izy.
Toerana voajanahary iray hafa very, any amin'ny State of Ceará, avaratry Brazil. Izy io dia miavaka amin'ny dongona voajanahary mahafinaritra, toerana fivahinianana hippie izay hatramin'ny 2002 dia a Valan-javaboary voaaro. Izany dia mitazona azy io amin'ny toetra voajanahary mety.
Any amin'ny fanjakan'i Santa Caterina, 80 kilometatra miala an'i Florianópolis. Helodrano izay nandritra ny taona maro miafina amin'ny fizahan-tany ary ny hippies, ny backpackers ary ny mpanjono ary ny teratany ihany no namangy azy. Amin'izao fotoana izao dia misy toerana hijanonana, afaka mivezivezy ao anaty rano ianao ary mitaingina bareback eny amoron-dranomasina, saingy mbola toerana voaro mafy izy io, miaraka amin'ny fizahan-tany miaraka amin'ny feon'ny fieritreretana.
Fantatra erak'izao tontolo izao ity morontsiraka ity, amin'ny Rio de Janeiro, ary iray amin'ireo mpitsidika indrindra any Brezila. Mazava ho azy fa ny zavatra hitantsika eto dia fizahan-tany be sy karazana hetsika eto afovoan-tanàna. Ny mahazatra dia ny bara amoron-dranomasina eo amin'ny fidirana, ary ireo hetsika fialamboly marobe miaraka amin'ireo trano fisakafoanana, trano fisotroana ary mpivarotra amoron-dàlana.
Raha any Rio de Janeiro isika, ny zavatra mahazatra dia mitsidika ny morontsiraka lehibe hafa, Ipanema. Amoron-dranomasina tonga lafatra hafa mba hampialana voly ny tenanao, miaraka amin'ny promenade ary voalamina amin'ny 'lahatsoratra', izay ny paositry ny mpiambina. Tsy lavorary fotsiny amin'ny fandroana sy hankafizanao ny toetr'andro fa koa amin'ny fahitana olona ary maninona no tsy avelanao ho hita.
Any amin'ny tanànan'i Tamandaré, any Pernambuco, 113 kilometatra miala ny renivohitra, Recife. Tora-pasika tena tsara izay mitahiry io endrika bibidia io, miaraka amin'ny rano mangarahara sy milamina. Misongadina ny Capela de Sao Benedito tamin'ny taonjato faha-XNUMX, izay mbola ankalazana amoron-dranomasina ny fampakaram-bady. Somary sarotra ny fidirana, satria tsy maintsy mandalo tany manokana ianao.
Any Ilha Grande no misy azy, amin'ny lafiny atsimo amin'ny nosy. Miaraka amin'ny fiparitahana fasika fotsy telo kilaometatra, miaraka amin'ny 'amendoeiras' izay manome alokaloka manerana ny morontsiraka. Ho fanampin'izay, ny rano mafana, marivo ary miaraka amin'ny onja lava dia mamela ireo izay vaovao amin'ity taranja fanatanjahantena ity hivezivezy mandritra ny ora maro.
Amoron-dranomasina tsara tarehy iray hafa ao Fernando de Noronha, ao amin'ny State of Pernambuco. Fifidianana tonga lafatra amin'ny surf, satria amin'ny fahavaratra dia mety hahatratra dimy metatra ny haavon'ny onja. Ny morontsiraka dia miavaka noho izy feno vatofisin'ny vatolampy sy haran-dranomasina, mety indrindra ho an'ireo izay manao fanjonoana. Ny morontsiraka hafa hitsidihana dia Praia da Atalaia na Praia do Meio.
Morontsiraka mahafinaritra iray hafa hitan'ny vondrom-piarahamonina hippie tamin'ny fitopololahy. Any amin'ny State of Ceará, dia mitazona hatsaran-tarehy manokana izy, miaraka amina toerana izay miavaka ho an'ny hantsam-bato brownstone ary ny fananana izany lafiny iray amin'ny tanàna fanjonoana mangina izany. Betsaka ny hetsika ara-panatanjahantena hotanterahina ao anaty rano ao aminy, ary misongadina ihany koa izy amin'ny fananana fiainana amin'ny alina mahafinaritra. Toerana mety indrindra ho an'ny tanora.
Ny tanànan'i Río Grande do Norte dia toerana mpizahatany izay feno torapasika. Malaza sy malaza ny torapasika any Pipa, ary maro ny azo tsidihina, fa ny Baía dos Golfinhos na Dolphin Bay, fantatra ihany koa amin'ny Praia do Curral. Araka ny anarany, io no toerana mety indrindra ankafizo ireo feso, mandinika azy ireo ary milomano miaraka amin'izy ireo mihitsy aza. Izy io dia faritra fiarovana ekolojika, ary ny feso dia ampiasaina amin'ny olona, ​​ka toerana tsy mampino ny ankafizin'izy ireo. Ho fanampin'izay, ny rano dia madio toy ny kristaly ary manana onja antonony, ho an'ireo izay vao misavoana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Brasil » Ny morontsiraka 10 tsara indrindra any Brezila
Ny tanàna tsara tarehy indrindra any Espana